Maxay tahay aragtida garyaqaanada Somalia ee go’aankii ICJ? | Dalkaan.com
Home Warkii Maxay tahay aragtida garyaqaanada Somalia ee go’aankii ICJ?
Muqdisho (dalkaan) – Kadib go’aankii kama dambeysta ahaa ee ka soo baxay maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ oo Soomaaliya u xukuntay inta badan kiiska badda ayaa waxaa siyaabo kala duwan looga hadlay xukunka ay ridday maxkamadda cadaaladda.
Previous articleMaxay tahay aragtida gar-yaqaanada Soomaaliyeed ee go’aankii Maxkamadda ICJ?
Next articleDaawo: Afar sano, kadib xuska qaraxii 14-ka October (Warbixin)